noddle salad | Colourful Recipes
Tag Archives: noddle salad
ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ နှင့် ဟင်းရည်
ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ ( နှယ်ပီး ပုံ )
ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ အတွက် – ကြက်သား အုန်းနို့ဟင်း
ခေါက်ဆွဲ အလုံး နှင့် မုန့်ပြင်ထားသော ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ
ကြက်သား အုန်းနို့ စိမ့်စိမ့်လေး ထည့်ပီး …. ချဉ်၊ ငံ၊ စပ် ( သုပ်ပီး ပုံ )
ခေါက်ဆွဲ အပြား ( အပြား အသေး )
ခေါက်ဆွဲ အပြား သေး နှင့် ပြင်ဆင်ထားသော ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ ပန်းကန်
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ခတ်ထားသော ကြက်သားပြုပ် ဟင်းရည်
ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက် နှင့် ကုလားပဲ အကျက်မှုန့်
မုန့်ကြွပ်ကြော် ( ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲမှာ ထည့်စားလေ့ ရှိတဲ့ မုန့်ကြွပ်ကြော် အသေး မရှိလို့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲမှာ ထည့်စားသော မုန့်ကြွပ်ကြော် )
နောက်တနည်း – ခေါက်ဆွဲဖတ်ကို ကြော်ပီး မုန့်ကြွပ်ကြော်လည်း လုပ်လို့ ရပါသေးတယ်။
(ရေနွေးဖြောထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲ အစိုကို ဇကာ နှင့် ရေစစ်ပီး ဆီပူထဲမှာ ကြွပ်နေအောင် ကြော်လို့လည်း ရပါသေးတယ် )
ရေကို သေချာ စစ်ပါ။ ရေ မစင်ရင် ကြော်သည့်အခါ ဆီပေါက်ပါလိမ့်မည်။
ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ အတွက် အဆင်သင့် ….
**** ချက်၊ စားနည်း *****
ဒါက ကြက်ဥ ခေါက်ဆွဲပါ … သူ့ကို ဆီချက်ခေါက်ဆွဲတွေမှာ ထည့်စားတာမျိုး …. အမဲအူပြုပ်လို စွပ်ပြုပ်မှာ ထည့်စားတာမျိုး ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
ဒီ ကြက်ဥ ခေါက်ဆွဲ နှင့် ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ ချက်စားပါ။
ကိုယ့် ဆီချက် ခေါက်ဆွဲ ချက်စားဖို့ အစီအစဉ် ရှိလို့ သူ နဲ့ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ မစားဖြစ်ပါဘူး။
အိမ်မှာ ရှိတဲ့ မုန့်ဖတ်တွေထဲက ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲအတွက် မုန့်ဖတ် ရွှေးနေတာပါ …
ဒီမုန့်ဖတ်က ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူထဲ ၃ မိနစ်လောက် ပြုပ်ပီး ဇကာ နဲ့ ရေစစ်ထားလိုက်ရင် ရပါပီ …
ခေါက်ဆွဲ ၂ မျိုး
ခေါက်ဆွဲ ၃ မျိုး
spaghetti ခေါက်ဆွဲ အပြား အသေးလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်ပုံက … အိမ်မှာ ရှိတဲ့ ….
spaghetti ခေါက်ဆွဲ အပြား အသေး ကျတော့ ရန်ကုန်က ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ နဲ့ ပုံစံ တူပါတယ်။
အပေါ်က ခေါက်ဆွဲ အလုံးကျတော့ … ရန်ကုန်က ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ နှင့် အရသာမျိုး တူပါတယ်။
Wonton ကြက်ဥ ခေါက်ဆွဲက ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ အမျိုးအစားပါ။
အုန်းနို့ဗူး … cream ဗူးမို့ အုန်းနို့ ပိုပြစ်ပါတယ်။
နှုတ်နှုတ်စင်းထားသော ကြက်သားကို ဆား၊ သကြား၊ ငံပြာရည်၊ ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် နဲ့ နှယ်ပီး ခဏလေး နှပ်ထားလိုက်ပါ….
ဆီ အနည်းငယ်ကို အပူပေးပီး နှုတ်နှုတ်စင်းထားတဲ့ ကြက်သွန်ုဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဂျင်း ကို ဆီသတ် … ပီးတာနဲ့ နှပ်ထားတဲ့ ကြက်သားထည့်မွှေပါ။ ကြက်သားထဲက ထွက်လာတဲ့ လုံးရေ နှင့်ပဲ တရေလောက် ကြက်သားနူးအောင် အဖုံးအုပ် … ချက်ထားလိုက်ပါ။
တဆက်တည်းပဲ … တဖက်မှာ အုန်းနို့ တဗူးကို ဖောက်ထည့်ပီး အုန်းနို့ ပြစ်နေအောင် ကျိုထားလိုက်ပါ။ အုန်းနို့ ပြစ်ပြစ် ရလာပီ ဆိုတာနဲ့ ကြက်သားဟင်းနဲ့ ရောလိုက်ပီး အုန်းနို့ ဆီပြန်နေအောင် ချက်ထားသော ကြက်သား အုန်းနို့ဟင်းပါ …
ဟင်းရည် အတွက် – အသားနွှင်ပီး ကျန်နေတဲ့ ကြက် အရိုးတွေကို ဆား၊ သကြား၊ ဟင်းခတ်မှုန့် နဲ့ နှယ်ပီး ဓါးပြားရိုက် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း တို့ နဲ့ ပြုပ်ထားလိုက်ပါ။ ဟင်းရည်အိုး ပွက်ပွက်ဆူပီ ဆိုတာနဲ့ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ခတ် … ကြော်ထားသော ကြက်သွန်နီကြော် နှင့် နံနံပင် ခတ်လိုက်ပါတယ်။ ( အမှန်က မုန့်ကြွပ်ကြော် နှင့် ကြက်သွန်မြိတ် ဆို ပိုကောင်းပါတယ် )
ခေါက်ဆွဲဖတ် အပြား ၊ ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်နီ၊ နံနံပင်၊ သံပုရာသီး တစိတ်၊ မုန့်ကြွပ်ကြော်၊ ကုလားပဲအကျက်မှုန့်၊ ကြက်သား အုန်းနို့ချက်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက် ထဲက ကြက်သွန်ဖြူကြော်ပဲ ယူလိုက်ပါတယ်။ အစပ်စားမှာမို့ ငရုတ်သီး အကျက်မှုန့်
ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲကို အရည် လေး နဲ့ စားမယ်ဆိုရင် …
ကြက်သား အုန်းနို့ရည် ကျဲကျဲလေး ထည့်စားတာ ပိုစားကောင်းပါတယ်။
( သို့ )
ကြက်သွန်မြိတ် ခတ်ထားသော ကြက်သားပြုပ် ဟင်းရည် ထည့်စားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ကြိုက်တတ်ရင် ဂေါ်ဖီ ပါးပါးလေး လှီးထားတာ ထည့်စားလို့ ရပါသေးတယ်။
အချဉ် ကြိုက်တတ်ရင်လည်း သံပုရာသီးလေး ညစ်ထည့်ပီး စားပါ။
အုန်းနို့ခြောက်ဆွဲမှာ ထည့်စားသော မုန့်ကြွပ်ကြော် အတွက် ….
USA က . ဗီယက်နမ် ဆိုင်မှာ ၀ယ်လာတဲ့ … အ၀ါရောင် ခေါက်ဆွဲ အပြားခြောက် ထုပ် … တထုပ်ကို ၁ဒေါ်လာခွဲ ပဲ ရှိပါတယ် ….
မီးမြေးမြေး အနေအထားနဲ့ ဆီနှစ်ပီး ခေါက်ဆွဲခြောက်ပြားကို ကြော်တဲ့ ယောင်းမ ဇွန်းနဲ့ ဖိပီး ကြော်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ …
ကြော်ရတာလည်း မြန်တယ် … ရွှေမြန်မာက အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲမှာ ထည့်စားတဲ့ မုန့်ကြွပ်ကြော် အရသာ ကိုလည်း ရပါတယ် …
ဘယ်ခေါက်ဆွဲခြောက် မဆို ဆီဖြင့် ကြော်လိုက်ရင် မုန့်ကြွပ်ကြော်ကို ရပါတယ်။
ငါးမုန့် ကြော်သလိုမျိုးပါပဲ ..
ကြော်သည့်အခါမှာ အကျက်ညီစေဖို့ ကြော်သည့် ယောင်းမ ဇွန်းဖြင့် ဖိပီး .. မီးမြေးမြေးဖြင့် မှန်မှန်လေး ကြော်သွားပါ။
By Thet Nandar • Posted in Chicken - Curry, Chicken Recipe, Cooking Ingredients, Myanmar Traditional Foods, Noddle Recipe, Price - Cooking Ingredients, Salad Recipe	• Tagged food, noddle salad